Ity quiz ity dia manome anao paleta loko Pantone 2019 | Famoronana an-tserasera
Ya nihaona isika andro lasa izay ny loko Pantone amin'ny taona ho avy. Tonga izao ny fotoana fantaro hoe inona ny palette loko Pantone 2019 anao misaotra ny fanontanina navoakan'ny tranonkala iray izay ahitàna valiny fanontaniana hahagaga anao ny valiny.
Ity fanontaniana dia manandrana mamoaka ny toetranao miaraka amina loko maromaro. Isika rehetra dia manana loko izay mahazatra antsika matetika na afaka manova antsika hisafidy azy ireo ho an'io akanjo hariva io na hanomezana izany feo tonga lafatra ho an'ny efitranontsika izany.
Ny Prestige Flooring Co dia namorona fanadihadiana mampihomehy tsara izay hahafahanao hahafantatra ny paleta fandokoana Pantone amin'ny taona 2019. Tsy misy afa-tsy fanontaniana 10 azonao safidiana amin'ny fomba fitsapana.
Izany hoe, hahita a andian-tsary izay mila misafidy iray ary ilay antsoinao hoe mody; Ity no voalohany amin'ireo fanontaniana ary amin'ny teny Anglisy izy ireo, saingy mendrika hamaly ao anatin'ny minitra vitsy.
Ny fanontaniana hafa dia ny iza amin'ireo sary nofidinao ho «lanitra» na rehefa manafatra kafe izay mazàna ianao predilection. Miaraka amin'ireo fanontaniana 10 voavaly ireo, ity tranokala ity dia ho afaka hampiseho aminao ny loko misy loko azonao hatahorana amin'ny taona manaraka.
Palette loko rehetra omena ao ny valiny ho antsika tsirairay avy dia mifandraika manana andiana feony izay antenaina hanandramana.
Ilay tranonkala hitadiavana atombohy amin'ilay quiz mampihomehy ary izany dia hampahafantatra anao ny palette miloko Pantone 2019 is this. Raha ny fanazavana, vao tsy ela akory izay ilay mpikaroka loko Pantone no nohavaozina miaraka amina endrika vaovao inona no andramanao?.
A quiz hamaranana tsara ny taona ary fantaro izay loko afaka manaitra anao amin'ny taona 2019.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Jereo hoe inona ny palette loko Pantone 2019 misy amin'ity fanontaniana ity
Mihoatra ny 18.00 singa Krismasy ho an'ny volavolanao amin'ny $ 19 fotsiny!